English for Computers - 1
ELECTRONICS AND ELECTRONS
Everything in the universe is made up of tiny particles called atoms.Atoms,in turn are made up of even smaller particles called subatomic particles. These are electrons, protons and neutrons.At the centre of the atom is nucleus which containsabunch of these particles, namely protons and neutrons.The nucleus is surrounded by moving electrons.Protons are positively charged while electrons are negatively charged. Neutrons have no charge.Generally the number of protons and electrons are equal and they cancel each other's charges. The term electronics comes from electrons .
ကွန်​ပျူတာအတွက်​ အင်္ဂလိပ်​စာ - ၁
စကြာဝဠာထဲတွင်​ရှိ​သော အရာဝတ္ထုအားလုံးကို အနုမြူဟု​ခေါ်သော အလွန်​​သေးငယ်​သည့်​ အမှုန်​က​လေးများဖြင့်​ ပြုလုပ်​ထားသည်​။ အနုမြူများကိုလည်း ၄င်းထက်​​သေး​သော အမှုန်​က​လေး များဖြင့်​ပြု လုပ်​ထား ပြန်​သည်​။ ထိုအမှုန်​က​လေးများကို အနုမြူ၏ စိတ်​အပိုင်းက​လေးမျာ ဟု​ခေါ် သည်​။ ယင်းအစိတ်​အပိုင်းက​လေးများမှာ အီလက်​ထရွန်​၊ ပရိုတွန်​ နှင့်​ နယူထရွန်​များ ဖြစ်​ကြသည်​။ အနုမြူ၏​ အလယ်​ဗဟိုတွင်​ နယူကလိယ ဟူ​သောအရာရှိသည်​။ ထိုနယူကလိယသည်​ ပရိုတွန်​ နှင့်​ နယူထရွန်​များကို စုထားခြင်း ဖြစ်​သည်​။ ယင်းနယူကလိယကို အီလက်​ထရွန်​အမှုန်​က​လေးများ ကပတ်​၍ ​ပြေး​နေကြသည်​။ နယူကလိယ၏ အထဲတွင်​ရှိ​သော ပရိုတွန်​များတွင်​ လျှပ်​စစ်​အ​ပေါင်း ဓာတ်​ရှိသည်​။ ပတ်​​ပြေး​နေသော အီလက်​ထရွန်​များထဲတွင်​ လျှပ်​စစ်​အနှုတ်​ဓာတ်​ရှိသည်​။ နယူထရွန်​များထဲတွင်​ လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​မရှိပါ။ ​ယေဘုယျအားဖြင့်​ ပရိုတွန်​အ​ရေအတွက်​ နှင့်​ အီလက်​ထရွန်​ အ​ရေအတွက်​ တူကြသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ ပရိုတွန်​ရှိ အ​ပေါင်းဓာတ်​နှင့်​ အီလက်​ထရွန်​၏ အနှုတ်ဓာတ်​တို့သည်​ ​ကြေသွားကြသည်​။ အီလက်​ထ​ရောနစ်​ဟူ​သော​ဝေါဟာရသည်​ အီလက်​ထရွန်​မှ ဆင်းသက်​လာခြင်းဖြစ်​သည်​။
Universe (N) - စကြ၀ဠာ
Tiny (adj) - ​သေးငယ်​​သော
Particle (N) - အမှုန်​
made up of - ... ... ... ဖြင့်​ ပြုလုပ်​ထား​သော
Everything is made up of atoms - အရာဝတ္ထုအားလုံးကို အနုမြူများဖြင့်​ ပြုလုပ်​ထားသည်​။
atom (N) - အနုမြူ
subatomic (adj) - အနု မြူထက်​ငယ်​​သော
Nucleus (N) - အနုမြူ၏ အလယ်​ဗဟို။ နယူကလိယ
surround (v) ၀န်းရံထားသည်​​
surrounded by ... ... ... တို့ဖြင့်​ ၀န်းရံထား​သော
The nucleus is surrounded by moving electrons - နယူကလိယကို သွားလာလှုပ်​ရှား​နေ​သော အီလက်​ထရွန်​များက ၀န်းရံထားသည်​။
charged (adj) - လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​စီး​နေ​သော
Positively charged - အ​ပေါင်းလျှပ်​စစ်​ဓာတ်​စီး​နေ​သော
Negatively charged - အနှုတ်​လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​စီး​နေ​သော
Cancel (v) - ​ကြေသွားသည်​
Generally (adv) - ​ယေဘုယအားဖြင့်